1. बेकिंगमा के अपरिहार्य छ रंगको एक सुन्दर आयाम दिन्छ प्लस उत्तम स्वाद मा मिठास जोड्नुहोस् उच्च चिनी छ तर के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ? कसरी टुक्राई बनाउने? कसले सोचेको थियो कि यो एकदम सजिलो छ, र तपाई सजिलैसँग आफ्नो घर, भान्साकोठामा भएका सबै उपकरणहरू लिन सक्नुहुन्छ, यसलाई आफ्नो पेस्ट्रीहरू सुन्दर ढink्गले छर्काउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा गर्व गर्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तविक घर बनाउने प्रक्रिया हो। त्यो खुशीको परीक्षा वा जो कोही बेकि fromबाट अतिरिक्त आयको खोजी गर्दैछ। यसलाई एकै समयमा राम्रोसँग लागत कम गर्न यो गरौं।
2. चिनी भनेको के हो? यो वास्तवमै चिनी हो जुन राम्रो पीस प्रक्रियाबाट भएको हो। उपस्थिति सेतो पाउडर हो करीव%% कोर्नस्टार्च समावेश गर्दछ र बेक्ड सामानहरू टोपिंगको लागि घटकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। वाटरमार्क कुनै अवशिष्ट सिल बिना राम्रो छ। यो केक, डोनट्स र मिठोलाई मिठोसँग मिठो बनाउनको लागि गुँड बनाउने क्रीमको मिश्रण पनि हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो आफैंले गर्न सजिलो छ, कच्चा माल खरीद लागत कम गर्न मद्दत गर्दै। पत्ता लगाउन सजिलो, निम्न सामग्रीहरूसँग बनाउन सजिलो:
3. त्यहाँ केवल ingredients सामग्रीहरू छन् जुन प्रत्येक घरमा आईसि sugar चिनी बनाउनमा फेला पार्न सकिन्छ: चिनीको १ 150० ग्राम।
4. प्रति ११ ग्राम मक स्टार्च र ब्लेन्डर
5. चिनीबाट शुरू गर्दै। ब्लेन्डरमा हाल्नुहोस् र त्यसपछि राम्ररी कताई स्पिनिंगको समय प्रयोग गरेर, लामो होइन, २०--30० सेकेन्डको बारेमा
6. • त्यसो भए जाँच गर्नुहोस् कि मिश्रित चिनी राम्रो छ कि छैन। यदि अझै कुनै ट्याब्लेटहरू छन् भने, फेरि स्पिन गर्नुहोस्। यो ठीक नभएसम्म, एक सानो पाउडर जस्तो देखिन्छ। the जब चिनी राम्रोसँग मिश्रित हुन्छ। त्यसपछि माथि उल्लेख गरिएको अनुपातमा कर्नस्टार्च थप्नुहोस्। • त्यसपछि चिनी र कोर्नस्टार्च एकसाथ मिसिए। दुबै सामग्रीहरू करीव १० सेकेन्डको लागि ब्लेन्ड गर्नुहोस्।
7. • जाँच गर्नुहोस् कि सामग्री राम्रो हात पाउडरको साथ राम्रोसँग मिलाइएको छ। यो पूरा भयो। त्यसोभए छाप लगाइएको कन्टेनरमा भण्डार गरियो। सजिलैसँग प्रयोग गर्न
8. घर बनाइएको आइसिंगबाट मिठास र तातोता थप्नुहोस्। किनभने खाना राम्रो सामग्रीहरूको चयनसँग सम्बन्धित छ यदि हामी कच्चा माल उत्पादन गर्न सक्छौं वा हामीले घरमा बनाएको खानामा लागू एक अद्वितीय स्वाद हुनुको साथै मूल जान्नुहोस् यसले लागत घटाउन पनि मद्दत गर्दछ किनभने यो त्यस्तो चीज हो जुन बेकिंग फेस्टिवलको वरिपरि फेला पार्न सकिन्छ। आइसिंग चिनी बनाऔं केक वा पेस्ट्री आफै सजाउनुहोस् हामीले खाने कुराको ख्याल गर्ने व्यक्तिलाई मिठो चीज जान्न दिनुहोस् प्रेम, हेरचाह र न्यानोपनका साथ पनि लुकेको क्यान्डीको प्रत्येक अणुहरूमा जुन लुगा सुन्दर ढंगले सजाइएको छ वा बच्चाहरूलाई पुतली बनाउन र केक बनाउन आमन्त्रित गर्ने सबै गतिविधिहरू हुन् जसले सम्झनाहरू सिर्जना गर्दछ। र परिवारलाई पनि मुस्कुराउँछ एक स्वादिष्ट मिठाई भन्दा बढी